China abakhiqizi bemishini yekhofi kanye nabaphakeli | UChapman
✭ Le ngxenye yepulasitiki yingxenye eyinhloko yomshini wekhofi we-capsule, futhi yingxenye eyinhloko yomshini wekhofi we-capsule.
✭Okokusebenza okusetshenziselwa le ngxenye yepulasitiki yi-PA66 + 45GF, futhi kunezingxenye ezintathu zepulasitiki eziyinhloko ezidinga ukuhlanganiswa nale ngxenye yepulasitiki. Ingxenye yokuhambisa yomshini nokuqaqa ikhofi le-capsule akunakwehlukaniswa nale ngxenye eyipulasitiki eyinhloko.
✭ Izinzuzo zayo azilula ukukhubazeka, ukuzinza okuhle, ukucacisa okuphezulu, ukuqinisekisa ukuthi umshini wekhofi uzinzile ngesikhathi somsebenzi futhi wehlisa umsindo.
✭Lesi sikhunta ukukhiqizwa kwesikhunta senkampani yethu, okunikela kakhulu ngezinsizakalo zezingxenye zepulasitiki zabakhiqizi bemishini yethu yekhofi. Umthamo wokukhiqiza walesi sethi lesikhunta ngu-800 ngosuku.
Isikhunta CHA. I-CPM-150229
Inqubo Yokuqeda Ubuso I-VDI-33
Izinto zepulasitiki PA66 + 45GF
Ingxenye isisindo 120.61g
Usayizi wengxenye 155 * 85 * 52 mm
Isicelo Izinto ezisetshenziswayo
Usayizi isikhunta 450 * 400 * 421mm
Ingxenye Igama Izingxenye zomshini wekhofi
Umgijimi iphuzu lesango
Isikhunta Material 1.2343ESU / 1.2312
Isikhunta Isikhathi Sesikhathi: Ama-38's
Imishini yekhofi ehamba phambili isho ukuthi awudingi ukungcola ngokuthenga ubhontshisi wekhofi nokuwagaya. Yebo, lokho kuyangabazeka kwabanye ngokwezindleko nemfucuza, ngakho-ke ngeke sibize ngisho nomenzi wekhofi oyi-capsule ongcono kakhulu owenza ikhofi, kepha ngakolunye uhlangothi, ikhofi ye-capsule ilula ngokusobala. Woah, alliteration enhle.
Imishini ye-coffee pod iphinda ikhiqize imiphumela engaguquguquki okudume ukuthi kunzima ukuyithola kusetshenziswa imishini ejwayelekile ye-espresso namamodeli amaningi kabhontshisi kuya enkomishini. Ngomshini we-capsule umane ulayishe ku-pod, ucindezele inkinobho bese kuvela ukuphuma kwegolide elimnyama elifakwe i-crema ngokuqinile njenge-punchy njengokugcina.
Le ngxenye yepulasitiki iyingxenye ebaluleke kakhulu yomshini wekhofi we-capsule, ophethe zonke izenzo zomshini wekhofi. Udlale indima ebaluleke kakhulu yokuzinza nokuholwa.
Langaphambilini Ikhava yangemuva yabalandeli
Olandelayo: Ikhava yegiya lokuqondisa elincane elincane